मंगलबार शेयर बजार ३.३६ अंकले बढ्याे, काराेबार कति भयाे ? - Khabar Break | Khabar Break
माघ ७ – धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले वृद्धि भएको छ । सोमबार २६ अङ्कले घटेको बजारमा आज सामान्य सुधार देखिँदै नेप्से ३.३६ विन्दुले बढेर एक हजार ३२०.४७ मा समेटिएको छ ।
सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड,कति छ आजको मुल्य ?
साताको अन्तिम दिन : नेप्से १४ सय ३४ अंकमा, ११ अर्ब २० करोड ५४ लाखको कारोवार
६ महिनामा मुल्य वृद्धि ६ दशमलब चार एक प्रतिशत